Sawirro: Robert Mugabe oo is casilay iyo dibadbaxyo lagu taageerayo is-casilaadiisa oo ka bilawday dalka Zimbab
arlaadi November 22, 2017 No Comments
Madaxweynihii dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo mudo 37 sano ah soo xukumayay dalkaasi ayaa is-casilay kadib markii uu la kulmay cadaadis fara badan oo kaga imanayay xisbigiisa Zanu PF, ciidamada dalkiisa, shacabka iyo mucaaradka.
Madaxweyne Mugabe oo 93 sano jir ah ayaa waxa uu dalka Zimbabwe kasoo noqday raisalwasaare kadibna madaxweyne isaga oo intii uu talada dalkaasi hayay hirgeliyay sharci dhulka beeraha lagaga qaadayo beeraleydii cadaanka ahayd ee ku noolayd dalkaasi dhaca koonfurta Afrika.
Mugabe ayaa inta badan gacan bir ah ku xukumayay dalkiisa ayada oo ay in badan oo ka mid ah shacabka dalkiisa iskaga carareen dalka magangelyana weydiistay dalka Koonfur Afrika iyo dalal kale.
Markii lagu dhawaaqay is-casilaada Robert Mugabe ayaa waxaa durba iskusoo baxay kumanaan shacabka ku dhaqan magaalada Harare ee caasimada dalka Zimbabwe iyo magaalooyinka kale ayada oo ay sidoo kale kumanaan reer Zimbabwe ah iskugusoo baxeen dariiqyada qaar ka mid ah magaalooyinka Koonfur Afrika ee ay ku dhaqanyihiin qaxootiga ka yimid dalka Zimbabwe.
Waxaa lagu xasuusan doonaa madaxweyne Mugabe inay dadkiisa aajo iyo dib u dhac fara badani ku noolaayeen mudo sanado ah halka qoyskiisana ay hantidii dalka iska guranayeen.